သတင်း - High Temp Blast Drying Oven ၏ ထူးခြားချက်များ
High Temp Blast Drying Oven ၏ ထူးခြားချက်များ
မြင့်မားသောအပူချိန် အခြောက်ခံမီးဖိုသည် ဘဝနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အသုံးအများဆုံး စမ်းသပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသော်လည်း အလွန်လက်တွေ့ကျပြီး ဘေးကင်းပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလုပ်ဆောင်ချက်သည် ထုတ်ကုန်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အော်ပရေတာဘေးကင်းရေးတို့အတွက် ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။အပူချိန်မြင့်မားသော အခြောက်ခံမီးဖိုများသည် ဈေးကွက်ဝယ်လိုအား၏ အဓိကရေစီးကြောင်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ပြည်တွင်းလေမှုတ်စက် စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏နည်းပညာအဆင့်ကို လွန်စွာတိုးတက်စေရမည်၊ အခြောက်ခံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။၎င်းတို့အနက်၊ DRICK မြင့်မားသော အပူချိန်ပေါက်ကွဲမှု အခြောက်ခံမီးဖို၏ အင်္ဂါရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. စတူဒီယိုသည် စတီးပြား သို့မဟုတ် သံမဏိပြားကို လက်ခံသည်။
2. ဆက်တင်အတွက်၊ အပူချိန်တိုင်းခြင်း၊ အချိန်ကိုက်ခြင်း၊ ပါဝါဖိနှိပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် နှစ်ထပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်ပါရှိသော မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာအသိဉာဏ်ရှိသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ။
3. လေပူလည်ပတ်မှုစနစ်သည် ဆူညံသံနိမ့်ပန်ကာနှင့် လေပြွန်တစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အလုပ်ခန်းအတွင်းရှိ တူညီသောအပူချိန်ကို ထိရောက်စွာအာမခံချက်ပေးသည်။
4. အမှီအခိုကင်းသော အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်အချက်ပေးစနစ်၊ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စမ်းသပ်မှု၏ဘေးကင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသေချာစေရန်။(ရွေးချယ်နိုင်သည်)
5. RS485 အင်တာဖေ့စ်ဖြင့်၊ ၎င်းသည် အသံဖမ်းစက်နှင့် ကွန်ပျူတာသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ၏ ပြောင်းလဲမှုများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။(ရွေးချယ်နိုင်သည်)
မြင့်မားသော အပူချိန် အခြောက်ခံသည့် မီးဖိုသည် အနာဂတ်တွင် ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာမည်ဖြစ်သည်။မည်သည့်နေရာတွင်ထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ ၎င်းတွင် အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအတိုင်းအတာရှိပြီး၊ အခြောက်ခံကိရိယာများ၏ ချဲ့ထွင်မှုနည်းပညာသည် အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် သေချာစေနိုင်သည်။ထို့ကြောင့် စက်ကိရိယာများ၏ ကြီးမားသော သုတေသနပြုမှုသည် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 01-2021